श्रीमान‍्ले एस्तो भनेपछि जापानी मोडलले विवाहको एक हप्ताभित्रै गरिन् डिभोर्स :: Nepal Post Dainik श्रीमान‍्ले एस्तो भनेपछि जापानी मोडलले विवाहको एक हप्ताभित्रै गरिन् डिभोर्स | Nepal Post Dainik
श्रीमान‍्ले एस्तो भनेपछि जापानी मोडलले विवाहको एक हप्ताभित्रै गरिन् डिभोर्स
February 16, 2020 मा प्रकाशित
२९ वर्षे कातो सारी विलासी जीवनशैलीका लागि परिचित छिन् । उनी असाध्यै महँगो फेसन ब्रान्डकी पारखी पनि हुन् ।
तर उनका श्रीमानले कहिल्यै पनि सोचेका थिएनन् कि उनकी श्रीमतीको खर्च गर्ने बानीले उनको व्यवसायलाई नै धरापमा पार्नेछ । नाम नखुलाइएका रियल स्टेट व्यापारीले यी मोडललाई सन् २०१९ मे देखि डेटिङ गर्न थालेका हुन् । विवाह हुनु साढे तीन महिना अघि उनले ती व्यावसायीको ९.१ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब रुपैयाँ बढी) खर्च गरिन् । यति हुँदा हुँदै पनि उनले सारीसँग विवाह गरे तर विवाहको पहिलो हप्तामा उनले श्रीमतीलाईआफ्नो व्यावसाय खासै राम्रो नभएकोले खर्च कम गर्न आग्रह गरे ।
श्रीमानको यस्तो आग्रह उनलाई चित्त बुझेन तसर्थ सम्बन्धविच्छेदको माग गरिन् ।केहि दिन अघि रिलिज भएको युट्युब भिडियोमा कातो सारीले छुट्टिएको ६ महिनापछि सम्बन्धविच्छेद टुङ्गो लगाएको जानकारी दिइन् । ती मोडलले श्रीमानले खर्च कम गर्न भनेपछि विवाहको पहिलो हप्तामा नै सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिएको जानकारी दिइन् ।
‘उनीसँग विवाह भएको के अर्थ भयो र ? श्रीमतीको खर्च गर्ने बानी थेग्न नसक्ने गरिब व्यक्तिमाथि मेरो कुनै रुची छैन,’ उनले भिडियोमा भनिन् ।कातो सारीले पैसाका लागि ती व्यक्तिसँग विवाह गरेको प्रशंसकसामू स्विकारिन् । उनले आफ्नो श्रीमानको पैसाले महँगा कार, गहना र लुगाफाटो किन्न सक्दिनन् भने उनीसँग विवाहको के औचित्य रह्यो भन्ने प्रश्न गरेकी छिन् ।
उनका अनुसार महिलाले गर्भावस्था, बच्चा जन्माउने, हुर्काउनेलगायतका जैविक प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ जबकी पुरुषले आफ्नो परिवार र बालबच्चाका लागि पर्याप्त पैसा जुटाउनुपर्छ । ती मोडलको यस्तो खुलासा र विवाहप्रतिको उनको धारणा कतिजनालाई फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन जसलाई उनीहरुले कमेन्टमार्फत् पोखेका छन् ।
यहाँ खराब आचरण भएका थुप्रै महिला छन् तर उनी त अर्कै स्तरकी रहिछिन्,एक व्यक्तिले युट्युबमा कमेन्ट गरेका छन् ।यी महिला देखेर साह्रै दया लाग्यो । अहिलेसम्म उनले राम्रो जीवन बाँचेकी छैनन् जस्तो लाग्यो । यी महिलाको के नै राम्रो छ ? अनुहार हेर्दा मर्नै लागेको जस्ती छिन् । अचम्म छ,’ अर्काले लेखे ।